Momba anay - GUODA (Tianjin) science and technology development Inc.
Manokana amin'ny fanamboarana bisikileta sy ny varotra, GUODA(Tianjin) siansa sy teknolojia fampandrosoana Inc. mamokatra karazana bisikileta rehetra, ao anatin'izany ny bisikileta elektrika sy bisikileta, môtô elektrika ary scooter, bisikileta ankizy sy kodiaran-jaza, hikarohana traikefa mitaingina tsara kokoa amin'ny fiainana isan'andro. Tamin'ny 2007, nanolo-tena hanokatra orinasa matihanina izahay hanamboarana bisikileta elektrika. Tamin'ny 2014, natsangana tamin'ny fomba ofisialy tany Tianjin, ny tanàna seranan-tsambo varotra vahiny lehibe indrindra any avaratr'i China Tamin'ny taona 2018, aingam-panahy avy amin'ny "the Belt and Road Initiative" Ie "The Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road", natsangana ny GUODA (Africa) Limited hizaha bebe kokoa amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ankehitriny, ny vokatray dia mahazo laza malaza eto an-trano sy any ivelany.
Maniry ny ho mpiara-miasa aminao mahatoky izahay ary hamorona ho avy feno fandresena handresy!